नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपाल फेरी कोरोनाको चपेटामा पर्न सक्ने भन्दै बिज्ञहरुको चिन्ता, भारतमा कोभिडका संक्रमितहरुको संख्या निक्कै बढ्न थाल्यो !
नेपाल फेरी कोरोनाको चपेटामा पर्न सक्ने भन्दै बिज्ञहरुको चिन्ता, भारतमा कोभिडका संक्रमितहरुको संख्या निक्कै बढ्न थाल्यो !
नेपाल फेरी कोरोनाको चपेटामा पर्न सक्ने भन्दै बिज्ञहरुले चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन । छिमेकी भारतमा दिनानु दिन कोरोना संक्रमितहरुको सन्ख्या बढ्न थाले पछि खुल्ला सिमाका कारण त्यसको असार नेपालमा पर्न सक्ने र यो छिट्टै फिल्ने बिगतको अनुभबले चिन्ता पैदा भएको हो । भारतमा विगत केही सातादेखि कोभिड १९ का संक्रमितहरुको संख्या निक्कै बढ्न थालेको छ । संख्या बढेसँगै भारतमा कतै कोभिडको चौथो लहर त आउन थालेको होइन भनी आशंका समेत गर्न थालिएको छ ।
पछिल्लो २४ घन्टामा त्यहाँ ८ हजार ३ सय २९ जना नयाँ संक्रमित थपिएको र कोभिड कै कारण १० जनाको मृत्यु भएको भारतिय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमितको यो संख्या १०३ दिन यताकै सबैभन्दा बढी हो । भारतको महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिमबंगाल, कर्नाटक र केरला लगायतका राज्यहरुमा कोभिडका संक्रमितहरु बढ्दै गएको तथ्याङ्क ले देखाएको छ । कोभिड कै कारण भारतमा हालसम्म ५ लाख २४ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भैसकेको छ । कोभिडको संक्रमणबाट बचाउन त्यहाँ १ अर्ब ९४ करोड भन्दा बढी खोप लगाइसकिएको छ ।